Diyo post :: आखिर धनले के गर्छ र ! सुनको सर्ट लगाएको शरिर क्षणभरमै रक्ताम्यै बनेपछि.... आखिर धनले के गर्छ र ! सुनको सर्ट लगाएको शरिर क्षणभरमै रक्ताम्यै बनेपछि.... - Diyo post
आखिर धनले के गर्छ र ! सुनको सर्ट लगाएको शरिर क्षणभरमै रक्ताम्यै बनेपछि….
एजेन्सी । दुई करोडको ‘गोल्डन सर्ट’ लगाउने पुणेका दत्तात्रेय फुगे शुक्रबार सबेरै तीन बजे चक्कु र ढुङ्गा प्रहारबाट हत्या भएको छ । उनी एक बर्थडे पार्टीबाट घर फर्कदै थिए । फुगे गोल्ड म्यानको नामबाट चर्चित थिए । सँधै २० बडिगार्डसँग रहने फुगे घटना भएको समयमा भने एक्लै थिए । संभवत घटनाका आरोपीहरुलाई थाहा थियो की उक्त समयमा उनीसँग बडिगार्ड कोही पनि थिएनन् ।
प्रहरीले हत्याको अनुसन्धानको लागि चार जनालाई हिरासतमा लिएको छ ।
शव यस्तो हालतमा थियो
हत्याको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीका अनुसार फुगे ‘मनी वक्रतुंग’ नामको चिटफन्ड कम्पनि चलाउँदै थिए ।
यो कम्पनिमा कयौं मानिसहरुलाई करोडौं लगानी गराएका थिए । उनीमाथि मानिसहरुको पैसा उठाएको आरोप पनि लागेको छ । उनका विरुद्ध कयौं मानिसले रिपोर्ट पनि दर्ज गरेका छन् । शुक्रबार विहान तीन बजे आससार उनी शहरको दिघे बर्थ डे पार्टीबाट घर फर्कदैँ थिए । बाटोमा उनीमाथि ७÷८ जनाले ढुङ्गा, रड र चक्कु प्रहार गरेका थिए । अचानक भएको उक्त हमलाबाट उनी बाँच्न सकेनन् । पुरै शरिर रगतले भरियो । विहानै प्रहरीले उनको शव छतक्षत हालतमा देख्यो ।
चार आरोपी हिरासतमा
हत्याको खबरपछि पुगेको प्रहरीले उनको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाएको छ । उनको हत्याको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई हिरासतमा लिएको छ । हालसम्म प्रहरीले उनीहरु सबैसँग अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा उनको सुन लुट्नको लागि उनीहरुले आक्रमण गरेको पत्ता लागेको छ ।
फगेको ज्वैलरीको बिजनेश थियो । प्रहरीले केही महिना अगाडी नै उनलाई सचेत गराएको थियो । यद्धपी उनीमाथि भेसरी प्रहरी चौकीमा आर्थिक अपचलनको आरोपमा कयौं मुद्दाहरु दर्ता भएका थिए । उनलाई प्रहरीले नै उक्त अभियोगमा पक्राउ गर्ने जनाउ दिएको थियो । केही समयपछि पक्राउ परेका उनले प्रहरीलाई नै जबरजस्ति पिटेको अभियोग लगाएका थिए ।
राङ्का ज्वैलर्सका मालिक फूगे दुई करोडको सुनको सर्ट लगाएर चर्चामा आएका थिए ।
यो सर्टलाई कयौं महिनाको कडा मेहनतपछि पुणेकै नाम चलेका ज्वैलरी डिजाईनर तेजपाल रांकाले तयार पारेका थिए । यो सर्टलाई रांकाले चार हतियारबद्ध सुरक्षाकर्मिकोबीचमा १५ दिनको कडा मेहनतमा तयार पारेका थिए । सर्ट बनाउनको लागि ५० वर्ष पुराना डाईको प्रयोग गरिएको थियो । शर्टलाई हरेक हिस्सामा जोड्नका लागि १६ कालिगढले १५ दिनसम्म लगातार काम गरेका थिए ।
२० बडीगार्डले घेरिन्थे
फुगे जब यो सुनको सर्ट लगाएर बाहिर निस्कन्थे त्यतिबेला उनीसँग २० जना सुरक्षा गार्ड रहन्थे । सधैँ सेक्युरिटीमा रहने फुगे त्यो दिन किन एक्लै रहे भन्ने विषयमा प्रहरीले छानबीन गरिरहेको छ ।
भारतकै महाराष्ट्रका व्यापारी तथा राजनेता पंकज परख पनि गोल्ड सर्ट लगाउँछन् । उनको सर्टको वजन ४.१ केजी रहेको छ । सबैभन्दा महंगो सर्ट लगाएको भन्दै उनको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्डमा प्रकाशित भएको थियो । उनीभन्दा पहिले यो रेकर्ड दत्तात्रेय फूगेको नाममा थियो ।